Ngabe amasondo eFulcrum kukhona okuhle? - Izibuyekezo
Main > Izibuyekezo > Ukubuyekezwa kweFulcrum 5 - izixazululo ezintsha
Ukubuyekezwa kweFulcrum 5 - izixazululo ezintsha
Ngabe amasondo eFulcrum kukhona okuhle?
Okuhlangenwe nakho kwami ​​kube ukuthi banamandla, futhi bahlala isikhathi eside, futhi bagingqika kahle. Zisehlangothini olunzima, njengeI-Fulcrum5s. Ngilindele ukuthi ama-5 abeamasondo amakhulungemali. Nakhu ukubuyela emuva: Campy futhiI-Fulcrumukufaka esikhundleniusebenama-spokes abiza kakhulu.15 2006.
Amasondo ajulile abukeka ecwebezela, enza umsindo opholile, kepha okubaluleke kakhulu, anikeza inzuzo ebalulekile ye-aerodynamic ngaphezulu komugqa ojwayelekile onephrofayli yebhokisi eliyisicaba. Kepha abantu abaningi bayakhathazeka ngokugibela ezimpambanweni zemigwaqo futhi ngesizathu esizwakalayo lapho uphendukisa izibambo ngokungalindelekile kungazwakalisa ukwethuka. Kuyingozi impela kwezinye izimo.
Kodwa yimbi kangakanani inkinga? Kulesi sihloko sizobheka amasondo ajulile aphikisana nemimoya evundlile. (umculo we-dramatic) Sisebenzisa amanye amabhayisikili ebhalansi e-Zip ukubonisa lokhu ngoba angabaxhasi bethu. Kepha futhi ngoba empeleni basebenzise inqwaba yezinsizakusebenza bakhulisa amasondo asebenziseka kalula ezimeni ezinomoya impela.
Ividiyo isebenza neminye imikhiqizo yamasondo. Esinye sezizathu esenza sibhekane nalesi sihloko ukuthi ama-disc brakes akhuthaza abantu ukuthi basebenzise amasondo e-carbon kaningi. Uma ugibela amabhuleki asemgqeni emigwaqweni emihle, engcolile njengathi namuhla, ungawachitha kalula ama-turbine wakho omoya wekhabhoni.
Kepha uma ususa lokho, asikho isisusa sangempela sokungasebenzisi amasondo ekhabhoni unyaka wonke eceleni kwezindleko zokuqala zokukwazi ukuqhubeka kusebenza njalo. Ngakho-ke umbuzo uwukuthi, ungakwazi yini? (Umculo ojabulisayo) Ngokuyisisekelo, amathayi ajulile angazizwa engazinzile ngokwengeziwe ngoba anikeza umoya indawo enkulu engaphezulu. Manje lokhu ngaphambili kubi kakhulu kunangemuva ngoba isondo langaphambili liyakwazi ukuzungeza. (Percussion music) Kubalulekile ukuqonda kuqala ukuthi kungani isondo eliphansi lizizwa lingazinzile.
Ngakho-ke nansi isayensi. Uma ushayela, isondo yilo elihamba phambili futhi lokhu kuhlukanisa umoya. I-rim bese ilawula ukuhamba komoya futhi iyisize ukuthi ihlangane kahle emaphethelweni wokulandela ngemuva komugqa.
Umqondo lapha ukuthi lokhu kuzonciphisa ukuhudula kepha kukwenze usheshe ngomzamo ofanayo, okusho ukuthi ubheke phansi. Kodwa-ke, uma ama-engeli akho eqala ukwanda, isb.
Izinkinga zingavela, ngokwesibonelo kunomoya ovunguzayo. Ezingxenyeni ezinkulu zokuzamula, ukugeleza komoya kungaziphumela ngokungazelelwe emgqeni. Lokhu kudala ukwehla okungazelelwe kwengcindezi futhi kudale isiphithiphithi endaweni yengcindezi ephansi ngemuva komphetho nangemuva, okungalungile.
Futhi lolu hlobo lwetafula lokushushumbisa umoya lungumqondo ofanayo namaphiko endiza. Umehluko ukuthi lapho uphiko lwendiza lumi, luwa esibhakabhakeni, lubamba umoya. Lokhu akukuphazamisi, kungaba yingozi futhi kukubambezela.
Lesi akusona isikhathi sami sebhayisikili esivivinywayo, kodwa sebenzisa umcabango wakho. Kokuhlangenwe nakho kwami ​​kokuvivinywa kwesikhathi ngesondo langaphambili elisikiwe elijulile lapho ngizwa ukungazinzile emoyeni. Ngivame ukuphuma kuma-handlebars ami futhi kungenza ngingabi namandla kakhulu.
Akudingeki futhi ukuthi kube yisifuba esikhulu. Ukudonsana okuncane lapha nalaphaya kungakudalela isikhashana ukuthi unyathele, futhi kwezinye izimo ungazikhulula. Ngosuku olunomoya, le micimbi emincane, enovalo empeleni ingaba yinto ejwayelekile kakhulu futhi ingeze isikhathi esithe xaxa.
Mhlawumbe okubi kakhulu okungenzeka ukuthi kungenzeka ushayiswe ngokuphelele ibhayisikili lakho, iqhawe elidumile leTour de France uGeraint Thomas ushayiswe ibhayisikili lakhe eGent-Wevelgem ngo-2015. Lokhu kungasho nokuthi ezimweni ezinomoya iphrofayili ephansi ibhayisikili alisheshi kangako kunendawo eyisicaba, futhi empeleni lingahamba kancane, futhi kuhle ukuthi ungabi nomuzwa wokuthi ushaywa ibhayisikili nganoma yisiphi isikhathi, noma amasondo ajulile anyathela emoyeni, akuyona inkinga embi njengoba ungacabanga. Kahle ukuze ngithole ireferensi, ngicishe ngibe ngama-70 kilograms futhi ngigibele ibhayisikili elijule ngamamitha angama-40 kuye kwangama-60 unyaka wonke.
Isizathu salokhu manje ngokuyinhloko siwina ngoba ngiphelele futhi ngidinga lonke usizo engingaluthola. Kepha futhi ngoba kuyalawuleka. Idizayini yamasondo ithuthuke kakhulu kule minyaka embalwa edlule, kube lula kakhulu ukugibela kunokwakheka okudala okwenziwe ngo-V.
Emuva lapho kuvela izingxenye ezijulile okokuqala, zazimise okwama-V. Manje lokho kwakukuhle impela kuma-zero degrees, kepha hhayi njenge-yawodynamic yew angles kwabanye. Ukuhaha igama lobuchwepheshe le-angle yomoya.
Hawu ubani wenzani? Kuze kwaba ngawo-2000 lapho ungalahlekelwa umnyama nomhlophe kanye ne-flack cap. (I-Trumpet Wah Wah Wah) Eqinisweni, uma ushayela emhlabeni wangempela, i-yaw angle yomoya ayivamile ukuba zero, okusho ukuthi iphuma phambili ngqo. Imvamisa iza kukuzungezile ivela kuzo zonke izinhlangothi ezihlukile futhi ihlala ishintsha.
Ngenhlanhla, abaklami bamasondo bakubona lokhu futhi baqala ukuklama amarimu ngokufanele, wonke amarimu ayafana. Isinyathelo esikhulu esilandelayo ekwakhiweni kwamasondo wephrofayili ejulile kwaba ukusetshenziswa kwamarimu we-toroidal abanzi futhi ayindilinga. Manje, ngo-1996, kwanikezwa ilungelo lobunikazi leNhloko neZipp ngamaphrofayli we-toroidal rim, okuthi ngokwemibandela engeyona eyezibalo, kuhle, kumise okwama-U.
Iningi lemikhiqizo yamabhayisikili yathatha ubujamo obufanayo njengoba ibizinzile ngokwasemoyeni futhi ingajwayele ukuwela imimoya njengoba ibivumela ama-angles aphezulu etafuleni. Eminyakeni engama-20 eyedlule, iphrofayili emise okwezindandatho iye yalungiswa yaphindwa yenziwa phansi ukuze iyithuthukise kancane kancane emimoyeni evundlile nakulezi zigaxa ze-hyper. Umqondo lapha ukuthi ama-bumpsor node amaningi kuma-454 kepha futhi naku-858 avumela izindawo eziningi zokuchithwa kwe-vortex ephezulu kakhulu.
Yini lena esemhlabeni, ngikuzwa ubuza, Vumela ingcindezi yakheke bese ususa wonke umoya esitokisini esikhulu okungaholela ekuxakekeni okukhulu. Isondo kufanele likhiphe njalo umoya omncane ngohlobo lwesitebele esincane. Lokho manje kwenza ibhayisikili libe lula ukumbamba, ngokusho kweZipp, futhi lisalokhu ligcina isivinini esilinganayo esiqonde phambili.
Umbono uthi ungakwazi ukugibela amasondo ajulile. Kuyathakazelisa. Uma kufanele uthole amarimu wephrofayili ejulile, futhi uma kunjalo, yikuphi ukukhetha okufanele ukhethe.
Ekugcineni, konke kweza ngezidingo zakho kanye nenjongo ozifunela yona. Asiphakamisi umzuzwana ukuthi udinga ukuzitholela namarimu ajulile. Akukho lutho olungahambi kahle ngomugqa ojwayelekile webhokisi lesigaba sebhokisi le-aluminium ngokwakhiwa, amasondo anephrofayili ejulile kulula kakhulu futhi aphephe ukuwasebenzisa kuma-crosswinds uma ukwazi ukuwasebenzisa unyaka wonke.
Kusamele sikhombe, noma kunjalo, ukuthi zisengaba yidlanzana, yize zingcono kakhulu kunerimu eyisicaba, futhi uma bengizokhetha isondo lesilingo lesikhathi ngizoya esondweni elingaphambili elingama-70-80 millimeter ngaphambili, kahle ngaphandle kwezinsuku ezinesimo sezulu. Kodwa-ke, ukube bengineqoqo elilodwa kuphela lamaphrofayili ajulile, khona-ke bengizoya ngokujula okumaphakathi kwamamilimitha angama-40 kuye kwangama-50. Lokhu kungenxa yokuthi lokhu kungukujula engikwaziyo ukuthi kuzokukhululeka ukugibela isikhathi esiningi, futhi uma kube namandla kakhulu ukugibela lolu hlobo lwebhayisikili elilinganiselayo ngizwa ukuthi, kuhle, kuzoba nomoya omkhulu kakhulu ukuhamba ngamandla aphelele ngaphandle kwamasondo wena a Kungukujula okuhlukahluka kakhulu futhi, kanti okuthile okufana ne-858, ngenkathi kushesha kakhulu, kukhethekile kakhulu.
Noma kunjalo, kukhona i-caveat eyodwa. Abashayeli bangahlupheka kakhulu lapho kunesiphambano. Ngakho-ke uma umncane, cabanga ngendiza ethophayo, ikakhulukazi ngaphambili.
Ngaphambili unesisindo esincane phezu kwesondo ukuvimbela ukudikiza komhlaba kahle, uma uhlela ukugibela lapho kakhulu ungahle uthande ukuthola namasondo athophayo. Indawo enesiphephelo kunazo zonke emhlabeni yiMt. U-Everest ngasendleleni, ngakuhlola.
Ngiyethemba uthole ukuthi le ndatshana ilusizo futhi iyafundisa. Uma kunjalo, mnike isithupha. Uma ungathanda ukubona enye indatshana ngincoma le ndatshana ekubonisayo ukuthi amasondo we-aero angashesha kangakanani, ingezansi lapha.
Enziwa kuphi amasondo eFulcrum?
Imibuzo eminingi iyabuzwa ngama-freewheels e-GCN Tech Clinic. Ngakho-ke ngicabange ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sibheke ngqo ukuthi bayini nokuthi basebenza kanjani. (Hissing) (umculo onenhliziyo elula) (amasondo ajikeleza ahlukahlukene) Manje inhloso noma umsebenzi wesitimela esizimele akuyona nje ukuphatha iziphethu zakho.
Eqinisweni, ikuvumela ukuthi udlulise amandla kusuka emilenzeni yakho uye esondweni langemuva ukukusiza ukuthi uqhubekele phambili, futhi okubaluleke kakhulu, isici esingeziwe ukuze ukwazi ukugijima futhi. Okubaluleke kakhulu, masithembeke, manje ifreyili yamahhala ayinamatheli ngokuqinile kugobolondo langempela lesondo lakho. Esikhundleni salokho, zivame ukubanjwa ngaphezulu kwe-eksisi.
Ngakho-ke ungavele ukuhlehlise noma ukuhlehlise. Noma kungelula njalo. Ngokwengxenye lokho kungenxa yokuthi ungadonsa kalula ama-cap wokugcina.
Nabanye, noma kunjalo, konke okudingeka ukwenze ukufaka ama-wrenches ama-5mm Allen noma mhlawumbe isikrufu esivulekile se-17mm, uwakhulule, bese ungakhipha umzimba we-freehub, ungaqiniseki, hlola isiza somkhiqizi ngoba lokho lapho uzoyithola khona imiyalo ebanzi yobuchwepheshe. Kodwa-ke, lapho ususa u-freewheel egobolondweni langempela lehabhu uqobo, kufanele uqiniseke ukuthi uyenza kancane kakhulu futhi imvamisa ngaphezulu kwendawo ongeke uyilahle. Hhayi, kungekudala uzobona ukuthi kungani. (I-Freewheel spins) Manje amanye amasondo amahhala avalwa ngokuphelele futhi awakwazi ukunakekelwa noma ukunakekelwa nganoma iyiphi indlela.
Ngokuvamile lokhu kungatholakala emabhayisikili afana namanye amaShimano, amanye amaFulcrums amadala, noma iCampagnolo esezingeni eliphansi into enjalo. Kodwa-ke, esikhathini esedlule bengizikhipha kuhabhu, ngaziphonsa emgqonyeni kawoyela amasonto ambalwa, ngazikhipha futhi, futhi zasebenza kahle. Kepha okwesikhashana, uma ngabe unenye ngizozisindisela inkinga bese ngithenga entsha.
Okokuqala, ake sibheke ukuthi inqubo yamathathu noma amane ama-pawl isebenza kanjani. Lokhu kulo mbono kuyindlela yamaphara amathathu. Lapha sinabo, munye, babili kanye nabathathu.
Kwesinye isikhathi uthola ezine noma eziyisithupha ziqonde futhi balapho nje ngokulinganayo emaphethelweni. Manje lezi zigcinwe lapha. Kukhona indandatho encane ye-snap ezungeze onqenqemeni lwefreewheel yangempela.
Uma ngiphakamisa lokhu kusho ukuthi ngingawakhipha ngempela lawa ma pawls futhi empeleni ngingawalinda ukuthi asuse ukungcola ngaphakathi. Kwesinye isikhathi lawa ma-pawls agcinwa nje endaweni enemithombo emincane, emincane, emincane, nemithombo emincane. Kungakho kubalulekile ukuthi ungalahlekelwa yilutho ngoba mancane kakhulu amathuba okuthi ubathole behamba kukhaphethi wakho noma yini.
Ngakho-ke zisebenza ngokulengiswa ukuze zifane nengaphakathi legobolondo langempela lehabhu. Ngakho-ke bacishe babe njenge-engeli ehlehlayo, ukuze kuthi lapho bengena endaweni yakho lapho ugibela namandla ahambisa ihabhu nxazonke. Ngokunjalo futhi, uma usunestree freel, empeleni zingamane zibuyele esimeni futhi lokho kwenza umsindo we-tickety-tick uzwakale ngaphakathi kwehabhu. (ngikitaza) Hhayi, nami ngingavele ngikhombise lo mklamo.
Ngakho-ke futhi kuyindlela yamateki amathathu, kepha iyaqhuma, inqunywe kahle. Ngakho-ke singakhombisa empeleni ukuthi kwenzekani lapha. Ngakho-ke sinama-latches amathathu ku-freewheel lapha esondweni langemuva futhi abanjelwe endaweni, njengoba ngishilo, ngeziphethu ezincane kanye nendandatho yokugcina.
Kepha okuthokozisayo, kukhona ama-notch amancane amancane ku-paw ngayinye kulehabhu, bese kuthi indandatho icindezelwe ezindlini zangempela zehabhu. Ngakho-ke kufana nokushayela, ucishe ukhale insimbi ukuze lezi zibambo zihlale phakathi, futhi lapho unamaphoyinti angu-120 ahlukene wokuhlaselwa. Ngakho-ke wonke umuntu unama-12, ngakho-ke unamaphuzu angama-36 lapho nonke nizobheja ngasikhathi sinye kusuka ku-120 yezindawo ezincane ngaphakathi.
Uma kuqhathaniswa nama-24 angaphakathi kwalo mbono, kungazwakala kukuhle njengalesi ihabhu lokugcina. Kepha-ke, ngeke uthole nzuzo yangempela noma inzuzo yokusebenza kulokho enakho ngombono wami, lalela lo msindo. (Ukuchofoza kwe-Freewheel) Kuhle kakhulu.
Senza ama-hubs amathathu, ngakho-ke bese sihlola ngokuhamba kwesikhathi. (Freewheel clicks) (I-Freewheel iyajika) Manje amasondo kaMavic asebenza ngokuhlukile futhi. Yize ezinye ezintsha zisebenza zifana ncamashi ne-DT Swiss kepha lena ekuleli sondo le-Aksium, ngizoyisusa ngokucophelela futhi uzobona ukuthi kungani, ngethemba ukuthi akukho okuqhamukayo.
Kepha zisebenza cishe okuphambene nokusethwa kwamahhala kwamahhala esasikubhekile, okungukuthi inqubo yamathathu noma amane.
Ngakho-ke lezi zicishe zinamathele emzimbeni wehabhu noma ku-ekseli, ihabhu, futhi ngemithombo emincane lapho kanye nalawo ma-pawls amancane agcinwe endaweni yawo, empeleni angena ezintanjeni ezingaphakathi komzimba we-freewheel. zisebenza cishe ngenye indlela bese ngokusobala lapho zingena endaweni enezikhala ngaphakathi komzimba we-freehub, kungukushuba kwentwasahlobo kwale mithombo emincane okuhlala kungimangaza ukuthi kungabuyisa onke amandla emilenze yakho abuyele endaweni yawo , okuzungezile ukuze uye phambili. Kuyamangaza lokho. (I-Freewheel spins) phezulu uhlobo oluhlukile lomshini we-ratchet.
Lokhu kungatholakala kuma-DT Swiss hubs nakwamanye ama-hubs asebenzisa ilungelo labo lobunikazi. Ngakho-ke ake sisuse ikepisi lokuphela kuqala. Imvamisa akulula kangako.
Bekufanele ngenze okuncane okukholisayo. Lapho-ke lapho sithatha u-freewheel, uzobona ukuthi kukhona ama-jag amancane kuwo. Manje sesine-nib encane, bese-ke sesinezinto ezimbili zalokho iDT Swiss ekubiza ngokuthi ama-star ratchets.
Futhi ngenkathi omunye wabo ehlezi lapha egobolondweni langempela lehabhu, phakathi lapho. Uyabona nje ukuthi sinezikhala ezincane lapho ezingangena kuzo futhi nalo mzimba we-freehub. Ngemuva kwalokho umlingo usebenza lapha.
Kucishe kufane nepuleti yokubamba, kufana nalokho ongakuthola emotweni lapho uhlukanisa iklatshi. Ngakho-ke uyabona lapha ukuthi lezi zingcwecwe zezinkanyezi zifakwe isiga ngakolunye uhlangothi bese ziyicaba ngokuphelele kolunye uhlangothi. Lokho kusho ukuthi uma enye yazo ingena ku-freewheel, inengxenye eyisicaba ngokumelene nokuthwala ngaphakathi.
Okokuqala, kufanele ubeke isiphethu esincane lapho ngoba lokhu empeleni kusiza ekubandakanyeni nasekuyekiseni inqubo ye-freewheel ngomzimba wangempela wehabhu uqobo. Ngemuva kwalokho ubuyohlanganisa izintambo ndawonye uma ucabanga ukuthi lokhu kungaphakathi kwegobolondo lehabhu. Yilokho kanye ekwenzayo ngakho-ke iyaqhuma (ichofoze) futhi ikhulule ama-hub spin futhi yilokho okukunikeza lowo msindo opholile wokuzwakala.
Enye yezinzuzo zangempela zalokhu ngicabanga ukuthi unamaphuzu amaningi wokuxhumana lapha. Esikhundleni sokuba nezinsimbi ezintathu noma ezine zamapayipi lapho unalezi zingxenye kuphela ezisebenzile, lapha, kahle, sinamaphuzu ahlukene angama-36 wokuzibandakanya ngasikhathi sinye. (Chofoza) (freewheel spins) Okunye ukusetha okufana ncamashi ne-DT Swiss's nguChris King's, okuzoba igama elijwayelekile kwabaningi benu laphaya.
Yebo, isitayela sendawo yokuzimela sisebenza ngendlela yokuthi uma ufaka ingcindezi enkulu noma ukuphoqa, ukuzibandakanya kuyaqina futhi ngicabanga ukuthi kukhona ne-physics futhi, okusho ukuthi kukhulu ukudluliswa kwamandla. Ungakuhlukanisi lokhu njengoba kwenziwa izingcezu ezithile eziyinkimbinkimbi, kodwa ngethemba ukuthi izithombe ezisesibukweni manje zizokhombisa ukuthi isebenza kanjani. Futhi ikunikeza umsindo omuhle njengoba unamaphuzu angama-72 wokuzibandakanya. (I-Freewheel spins) Manje kunezinhlobo eziningi nezinhlobo ezahlukene zama-freewheels futhi asikwazi ukuwahlanganisa wonke, kodwa ukuze siqede ngawo, ake sithinte ubuchwepheshe be-axle clutch obutholakala kwezinye izindawo zeZipp.
Lokhu kusebenzisa amandla kazibuthe, ozibuthe abalungile Igobolondo langempela lehabhu lilungile ngaphansi kwalelo khava lekhephu. Singafinyelela kumazinyo angama-36 kanye nomshini we-ratchet. Ngakho-ke ozibuthe abayisithupha abangena ngokuphelele lapho ufaka ingcindezi ngokusebenzisa i-pedal freelheel yakho bese uma ungasebenzisi ingcindezi uma ukhululekile lapho ujika, bakhulula ngokuphelele, okulungile, empeleni uyakwazi ukuba ukuhamba ngokukhululeka okukhulu njengoba ungeke ube nokuphikiswa okungeziwe kwama-pawls noma ama-ratchets okuvalela endaweni kanzima.
Umbono omncane omuhle. (Chofoza) (rotate freewheels ahlukahlukene) Umsindo noma umsindo wehabhu lamafreyimu kukhulunywe ngawo kakhulu muva nje ngoba abantu bafuna umsindo ohlukile kunowejwayelekile. Esinye seziphakamiso zokwenza ukucindezela okudala okukhwaza kakhulu ukukhipha konke okokuthambisa nokugcoba kulezi zingxenye, kanye nokwelula iziphethu ukuzama ukuzenza zingene ngokushesha okukhulu ukudala lowomsindo omkhulu wakudala.
Bese kuthi ngakolunye uhlangothi ukubathulisa, abantu bawapakishe egcwele amanoni bese becindezela ngempela leyo mithombo abangayithandi. Yebo, buyisela emuva kakhulu futhi ususe nezindandatho zokubamba uma unazo. Ungenzi lokhu manje.
Isizathu salokhu ukuthi singashintsha isithuthuthu sakho sibe ibhayisikili eliqinile ngoba asinayo indlela yokubuyisa ngakho-ke awunakuba nofreewheel. Ngakolunye uhlangothi, bayabambeka endaweni, okusho ukuthi umgwaqo onguthelawayeka uyaphenduka kodwa awufaki igobolondo langempela lehabhu ukukuqhubela phambili. Kukhona okunye ukuthuthukiswa okwenziwe.
Njengakwi-DT Swiss, kukhona ama-ratchets angena esikhundleni sangempela. Lezi zingcwecwe zezinkanyezi zingahlanganiswa namazinyo afinyelela kwangu-54, okungakunika umgwaqo onguthelawayeka ozwakala kakhulu. Futhi kukhona ezinye izindlela laphaya.
Ngakho-ke lesi ukuphela kwesikhathi engizokwenza ngaso, kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukwenza into enjengale ngaphakathi. Kufanele kube yindlela yamahhala yesondo. Singumthumeli wamahhala onesizotha.
Ingxenye yebhayisikili abaningi bethu abavame ukuyikhohlwa, kepha yenza umsebenzi obaluleke kakhulu. Ngazise ukuthi ufunani Okulandelayo, ngizokukhombisa ukuthi isebenza kanjani ngebhayisikili. Ngoba ngiyathanda ukungena kokubalulekile kwalezi zinto.
Bamba iqhaza kumazwana angezansi. Futhi khumbula ukuyithanda futhi wabelane ngayo nabangani bakho abafuna i-freehub enomsindo omkhulu ukuze ibaxwayise ngezingozi ezihilelekile ngoba uJohnny Text ubatshele ukuthi bazenze. Manje, khumbula ukuvakashela isitolo se-GCN ku- shop.globalcyclingnetwork.com lapha nalapha ngezansi.
Yimaphi amahabhu asetshenziswa amasondo eFulcrum?
Bafaka i-2Way-Fit, i-6082 T6 aluminiumusebe,izikhungoezinezigaba zesikhungo se-carbon-fiber, CULT ceramicamabombo, umzimba ophethwe i-plasma mahhala futhi ulinganisa i-1,475g ebanjiwe. Irimu langemuva lijule ngo-30mm, ingaphambili lingu-27mm futhi womabili anobubanzi bangaphakathi obungu-17mm. Thenga uma: Ufuna ukukhanya, ngokusheshaamasondongokucwebezela kombala.
Ingabe iFulcrum Racing Quattro Tubeless Ready?
I-Fulcrum Racing QuattroIgalari yehabhu lekhabhoni
I-Umjaho QuattroIzikhumulo zinama-eksisi wama-alloy angaphezulu angenalutho asebenza kuma-cartridge bearings. Ngokwenani lobuso, umbhede ongasetshenziswanga werimu ulungeleengenasifoamathayi, noma kunjaloI-FulcrumUgcizelela ukuthiUmjaho QuattroIsondo le-Carbon alikhoengenasifo-ngomumo.
Amathayi omgwaqo angenamasondo namasondo kuya ngokuya kuthandwa, kepha abantu abaningi babe nezinkinga ngawo. Futhi akumangazi ngempela, akunjalo? Ngoba zibukeka zifana, kodwa zehluke ngokucacile ngokwanele kumathayi avamile namashubhu, empeleni siyakhubeka. Ake sizame ukwenza izinto zibe lula? Okulandelayo yimithetho yethu engenasifo nengenasidingo. (umculo we-techno okhululekile) Manje qala ngokufingqa okuncane ukuthi iyini ngempela.
Uhlelo olungenashubhu yilolo, ngokumangala, ngokumangala, olungenayo ithubhu kulo. Ukuze usebenze, umbhede womphetho kufanele ungangeni emoyeni, imvamisa ungaba lula njengeteyipu ekhethekile yokunamathisela ukubekwa uphawu, njengoba ubona kule DT Swiss lapha, futhi amanye amathayi angenasifuba nawo awangeneki. Ngakho-ke ngokoqobo akudingeki ukuthi ufake noma yini ukuze uzisethe, futhi azinomoya.
Iningi, noma kunjalo, lidinga uhlobo oluthile lwe-liquid sealant, olugqoka ingaphakathi lesondo bese ligcwalisa yonke leyomigodi emincane, luyenze ingangeni emoyeni. Kepha njengebhonasi eyengeziwe, le sealant izophinda ivale ama-punctures amaningi ngenkathi ushayela. Manje, ngaphandle kwe-sealant, awusakwazi ukuthola ama-punctures, kepha usengaba sengozini ezintweni ezibukhali - uhlelo olungenashubhu lomgwaqo empeleni luyisixhumanisi esiphakathi kobuhlalu bamathayi nodonga lwe-rim.
Zombili lezi zingxenye kumele zingabi nathebhu ukuze ziphephe. Okungiholela ngqo kweyethu yokuqala ungazami ukufaka ithayi elijwayelekile lomgwaqo. Empeleni kuyingozi njengoba isondo elikhethekile elingenashubhu linobuhlalu obuqinile obungaluli.
Isizathu salokhu ukuthi kusobala ukuthi alikho ithubhu kulo elingaligcina onqenqemeni. Ungayiphonsa ngevolumu enkudlwana, amathayi okucindezela aphansi njengamathayi amabhayisikili asezintabeni noma amathayi e-cyclocross, kepha ingcindezi ephakeme edingekayo yamathayi omgwaqo amancane kusho ukuthi imane nje iphezulu, ihle kakhulu, inengcindezi encane kuMathayi akho angenasifo uma uqhathanisa nalokho ongakwenza ukushayela ngamathayi akho ajwayelekile we-tubular. Ngokuyisisekelo, kukusiza ukuthi ugingqe kahle kunoma yini ngaphandle kwetiyela elishelelayo njengoba isondo elithambile likwazi ukumunca lokho emsindweni womgwaqo.
Futhi akudingeki ukhathazeke ngokulimala noma kunjalo. Futhi yebo, ngingacabanga ukudonsa ukushayela i-46 PSI kuma-28s. Yebo, ngishilo nge-sealant ngaphambili ngale ndlela ngithola ukuvikelwa kokubhoboza ezintweni ezibukhali nangokulwa nokubanjwa.
Kepha kufanele ukhumbule ukuthi i-sealant inokuphila konke. Iyoma ithayi. Ngakho-ke njalo ngezikhathi ezithile mhlawumbe njalo ezinyangeni ezintathu noma ezine uzodinga ukugcwalisa la mazinga e-sealant.
Kalula kakhulu. Mane nje udedele ingcindezi emasondweni akho, susa i-valve core, jove more sealant (pop) bese uyahamba. Qiniseka ukuthi ucindezela ubuhlalu besondo ungene endaweni yokuphumula emaphakathi nomugqa lapho udonsa ithayi.
i-cervelo r5 isisindo sefreyimu
Lokhu kunciphisa ngempumelelo ububanzi besondo ngakho-ke kukunikeza ukuxega kakhudlwana esondweni ukuze ukulithole ngaphesheya kohlangothi oluzimele. (I-Bike Pump) (Uyabubula) Ungachithi amahora upompa amathaya angenasifo. Kunezeluleko eziningi ezincane ezingenza impilo ibe lula kakhulu.
Ngakho-ke nge-sealant yakho ngaphakathi kwesondo, uzofuna ukuyigoqa kahle uqinile phansi noma kuthebulethi yakho. Ngimboza ubuhlalu besondo ngongqimba omuhle we-sealant. Futhi lokho kufanele kusho ukuthi kulula kakhulu ukufaka.
Uma lokho kungasebenzi, isinyathelo esilandelayo ukuthatha amanzi anensipho bese umane uwashayela odongeni lwasethangeni, futhi lokho kungasiza ukuvala izinto phezulu. Manje kukhona ezinye izeluleko, kepha uma ngikhuluma iqiniso, uma ngabe zingalingani ngalesi sikhathi, lapho-ke ngivame ukuphelelwa yisineke Khipha izibhamu ezinkulu. (I-Punch bell) (I-Punch) Uma ungenasifo ngaphezulu kwezinhlobo ezahlukahlukene Uma ugibela amabhayisikili, khona-ke into enjengale yeTopeak Booster ingaba utshalomali olufanele.
Ngakho-ke kusebenza njengephampu ejwayelekile yesitimela. Kodwa-ke futhi inalo leli thangi lomoya ongalikhokhisa kuze kufike ku-160 PSI. Futhi-ke, ngokucindezela inkinobho, wonke lowo moya uyakhishwa, ivolumu ephezulu kakhulu, njenge-compressor izosebenza.
Uma ukwehla kwamandla emali kwamasondo angenasifo akuyona into evamile kuwe, mhlawumbe esikhundleni sokutshala imali kuyo, kufanele umane ubone i-air compressor yangakini. Empeleni, zonke izitolo zokulungisa nezindawo zokuphehla ugesi eziseduze kwami ​​zithi amathayi amabhayisikili awavumelekile ukufuthwa ngama-air compressors awo. Kepha mhlawumbe ungathola enobungane.
Futhi qaphela ngempela. Linda ukuqhuma okuxoxwayo kwezihlalo zobuhlalu. Bese usuqedile! (Bike Pump) (Pop) Noma yini oyenzayo, musa ukuvele uhlanye, phampa ufike ku-120 PSI bese uqhuma isondo ohlangothini.
Kuyazwakala futhi kuyaxaka impela. ungavele nje uphonsa isondo elingenashubhu kudotiIkwenzeka ukuthi ube nebhadi ngokwanele lokuthi uthole ithayi eliqhumayo elingavali, njengoba kwezinye izimo ungawalungisa amathayi. Ngikwenze kuphela ngekhithi ejwayelekile yokulungisa ukonakala, kepha ungathola futhi amakhithi okulungisa amasondo angenasifo.
Kwesinye isikhathi abakhiqizi abayincomi le ndlela, ngakho-ke mhlawumbe ufuna ukuhlola i-anna kuqala. Kunemisebenzi yakho nokungamele uyenze. I-Tubeless njengohlelo akuyona eyabo bonke abantu.
Abashayeli abaningi abasizwa ngempela isidingo sokushintsha njengamanje. Futhi lokho kulungile impela, kepha khumbula nje ukuthi sekuya ngokuya ngokuncintisana. Futhi ngokuqhubeka ubalekela i-asphalt, liba namandla icala le-tubeless.
Yebo, ngikushiya kuwe lokho. Kwesokudla, qiniseka ukuthi ubhalisela i-GCN ngaphambi kokuya le ndatshana, mane uchofoze emhlabeni ukwenza lokho. Futhi uma ufuna ukubona ezinye izindatshana ezimbalwa ezihambisana nesihloko, kuthiwani ngama-'Clinches vs Tubeless vs.
Kusezansi nje lapho. Noma, ukubona i-athikili lapho sibheka khona amarimu abanzi namasondo abanzi, mane uchofoze lapha ngezansi.
Ngabe amasondo eFulcrum Racing 900 angenaso ishubhu?
Le nqubo iyashintshaUmjaho4/5/6/7 DB futhiUmjaho400/500/600/700/800 /900DBamasondo(eklanyelwe ukusetshenziselwa isondo elihlanganayo nelihubhu langaphakathi) kwiTubelessAmasondo Ready(okusho ngeTubelessIsondo elilula, alikho ithubhu langaphakathi nokusetshenziswa okuphoqelekile ketshezi lwe-sealant).
Ingabe Umjaho weFulcrum 7 amasondo ikhabhoni?
Zonke izindlela ze-I-FulcrumIjubaneamasondowoza ngokugcweleamarimu ekhabhoninamahabhu, ama-ceramic bearings futhi asebenzise amaphethini wokukhuluma aero aqondile, nezipikha eziyi-18 ngaphambili (9 + 9) nezipika ezingama-21 ngemuva ngesilinganiso esingu-2: 1 (7kwesobunxele kanye no-14 kwesokudla).
Ingabe kufanele ngithenge amasondo ekhabhoni?
TOisondo lekhabhoniivame ukukhanya futhi iqine kakhulu kune-aluminium engaqhathaniswaisondo. Lokhu kwenzaikhabhoniinketho ethandwayo yokusebenza okuphezuluamasondo. Abagibeli abaningi nabaqhudelana ngokuncintisana bayakhethaikhabhoningoba isisindo nokuqina kuthuthukisa ukushesha nokuphathwa kwebhayisikili.
Ingabe amasondo e-Fulcrum ayikhabhoni?
Amasondo e-Fulcrumangene zombiliikhabhonikanye nokuphindwaphindwa kwengxubevange ukuze kuvumelane nezinhlobonhlobo zamabhajethi nezitayela zokugibela. Zitholakala futhi kuzinguqulo ezihambisanayo ze-disc brake ne-rim brake, ngakho-ke kufanele njalo ukwazi ukuthola ukusebenza okuphezuluisondoukulingana nokusetha kwakho kwamanje.
Ngabe amasondo eFulcrum Racing 900 awanaso ishubhu?
Le nqubo iyashintshaUmjaho4/5/6/7 DB futhiUmjaho400/500/600/700/800 /900DBamasondo(yakhelwe ukusetshenziselwa isondo eliqinile kanye nethambo langaphakathi) kwiTubeless Readyamasondo(okusho ngeTubelessIsondo elilula, alikho ithubhu langaphakathi nokusetshenziswa okuphoqelekile ketshezi lwe-sealant).
Ngabe umjaho weFulcrum 6 ulungele iTubless Ready?
Imininingwane yezobuchwepheshe ye-Umjaho 6I-DB iqinisekisa ukuthi bayaphumelela ezimeni ezahlukahlukene, ukukhuphuka kanye nezimo ezinomoya, futhi bangafaka amathayi abanzi, abambelele nomaengenasifo(engenasifoithephu ifakiwe nama-valve afakiwe).